admin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 1855
> မုန်တိုင်းဒဏ်ေုကာင့် ရန်ကုန်ိံငြ့်ူမန်မာူပည်အြိံႚ အဋ္ဌကီးအကဵယ်ပဵက်စီးဘီဘီစီူမန်မာဌာနမေ ၃၊ ၂၀၀၈(ညပိုင်းအသံလငြ့်အစီအစဉ်) မနေႚညတုန်းက ရန်ကုန်နဲႚ ဧရာဝတီဒေသကို ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဋ္ဌကီးအကဵယ် ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်သြားတဲ့အတကြ်၊ နောက်ဆုံးရရိတြဲ့ သတင်းတေအြရ၊္ဘမြိႚထဲမြာ အဋ္ဌကီးအကဵယ် ပဵက်စီးသြား္ဘပီးတော့ သစ်ပင်တ္ဘြေပိလြဲကုန်တဲ့အတကြ် တယ်လီဖုန်းလိုင်းတြေ၊ ဓာတ်အားပေးလိုင်းတြေ ပဵက်နေပၝတယ်။ အိမ်ခေၝင်မိုးတြေူပတ်ြထက်ြကုန်္ဘပီးတော့ အင်တာနက်အဆက်အသယ်ြလည်း အခက်အခဲတေနြဲႚ တြေႚနေရပၝတယ်။ ရန်ကုန်မအြပ တူခားနေရာဒေသက အပဵက်အစီးသတင်းတေကြိုတော့ အတိအကဵ မသိရသေးပၝဘူး။ ရန်ကုန်မြာ လူ ၃ ယောက် သေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတြေ ပေၞထက်ြနေပေမယ့် အတည်ူပခြဵက်တေကြတော့ သီူးခား မရရိသြေးပၝဘူး။ ရန်ကုန်လေဆိပ်ကို လောလောဆယ် ပိတ်ထားရ္ဘပီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မနြ်ူပည်နယ်၊ ကရင်ူပည်နယ်တေမြာ အရေးပေၞအေူခအနေ ထုတ်ူပန်ထားတယ်လိုႚ အခုနောက်ဆုံးသတင်းတေအြရ သိရပၝတယ်။...
> ရန်ကုန်္ဘမြိႚ မုန်တိုင်းအောက်ရောက် ဓာတ်ပုံသတင်း မေ ၃၊ ၂၀၀၈ ဒီမိုကရက်တစ်ူမန်မာ့အသံကူဖန်ႚဝေသော အထက်ပၝဓာတ်ပုံမြာ ယမန်နေႚ(မေလ ၂ ရက်၊ သောုကာနေႚ)က ရန်ကုန်္ဘမြိႚသိုႚ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ၀င်ရောက်္ဘပီးနောက် တြေႚရသောူမင်ကငြ်းတစ်ခုဖစ်သည်။ သစ်ပင်ကဵြိး္ဘပီး ဓာတ်ဋ္ဌကြိးံငြ့်ကားပေၞသိုႚ ကဵနေသည်။ အရာရြိတစ်ဦးက မုန်တိုင်းေုကာင့် ရန်ကုန်တငြ် အဋ္ဌကီးအကဵယ် ပဵက်စီးနေသည်၊ နေရာအတော်မဵားမဵားတငြ် အိမ်အမိုးမဵား လန်ြထက်ြသြား္ဘပီး လြဵပ်စစ်မီူးပတ်တောက်လဵက်ရိသြည်ဟုလည်း ဆိုသည်။ (ဓာတ်ပုံ-အေပီသတင်းဌာန/ဒီမိုကရက်တစ်ူမန်မာ့အသံ) No tags for this post.
> ဖက်ရငြ်ူပပြဲ ဓာတ်ပုံသတင်း မေ ၃၊ ၂၀၀၈ မေလ ၁ ရက်နေႚက ရန်ကုန်္ဘမြိႚ ကုန်သည်ဋ္ဌကီးမဵားဟိုတယ်တငြ်ူပလြုပ်သော မဂဿလာ သတိုႚသမီး သတိုႚသား ၀တ်စုံ ဖက်ရငြ်ူပပဲမြူမင်ကငြ်းတစ်ခု။ (ဓာတ်ပုံ-အေအက်ဖ်ပီသတင်းဌာန) No tags for this post.
>မစိုးရိမ်ဆရာတော်ုကီး၏္ဘသ၀ၝဒ ကောက်ိုံတခဵက်
> သာသနာ့အရေး ဒို့အရေးပေဆရာရော တကာရော မလျှော့သောစိတ်တွေဘယ်ရန်သူမျိုး ထိုးဖောက်ပါစေဒို့မမှု ပေါင်းစုကာကွယ်မလေသာသနာ့အရေး ဒို့အရေးပေ။ (ဦကောဝိဒါဘိဝံသ-မစိုးရိမ်ဆရာတော်) No tags for this post.
>Tribute to Sayadaw U Kovida from Ashin Nanika
> ကေဵးဇူးဂုဏ်ရြိန် ထူး ထိန် ထဋ်ြမိုႛဦြးိံမ်ညတ်ြလိုႚ ရြိခိုးမယ်အရင်ြဉာဏိကမေ ၂၊ ၂၀၀၈ စာရေးသူက မစိုးရိမ်စာသင်သားဟောင်း။ မစိုးရိမ်မြာနေခဲ့္ဘပီး မစိုးရိမ်ဆရာတော်မဵားဆီက ပညာတြေ လေ့လာဆည်း ပူးခဲ့တာ။ ဆိုတော့ ကိုယ့်ငၝးခဵဉ်မိုႛ ကိုယ်ခဵဉ်တယ်ူဖစ်မြာစိုးလိုႛ မစိုးရိမ်နဲႛ မစိုးရိမ်ဆရာတော်မဵားအေုကာင်း မေူပာလိုခဲ့ဘူး။ သိုႛပေမယ့် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီးကေဵးဇူးမကင်းလိုႛ မစိုးရိမ် အပေၞသံယောဇဉ်ရြိတဲ့ မိတ်ဆေတြေကြ မစိုးရိမ်နဲႛ မစိုးရိမ် ဆရာတော်ဋ္ဌကီးအေုကာင်းေူပာူပဖိုႛတိုက်တနြ်ုးကတယ်။ မစိုးရိမ် ကေဵာင်းတိုက်ဋ္ဌကီးကတော့ ပရိယတ္ဇိနယ်ပယ်မြာ၊ူမန်မိာုိံင်ငံ နယ်ခဵဲႛအောက်ကလတြ်ေူမာက်ရေး၊ အာဏာရင်ြမဵားအောက်က လတြ်ေူမာက်ရေး၊ အမဵြိးသား ရေးလပ်ြရြားမမြန်ြသမ္တွမြာ၊ ထိပ်ဆုံး ကရြိတဲ့ကေဵာင်းတိုက်ဋ္ဌကီးတစ်ခုဖစ်တယ်လိုႛဆိုလိုက်လဵင် အတန်္ဘခြံငုံမိမြာပၝ။ ဒီနေရာမြာ မစိုးရိမ်ကေဵာင်းတိုက်ထက် မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီး ဦးကောဝိဒၝဘိဝံသအေုကာင်းကိုပဲေူပာခဵင်ပၝတယ်။ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီး စံလန်ြတော်မူတဲ့သတင်းကိုကားမိတဲ့ ဒကာတစ်ဦးက မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဋ္ဌကီးရဲ့ သူမတူ...
> ဆမတ်ကတော့ ထုံးစံအတိုင်း အားလုံးကောင်းပၝသည်ခင်ဗဵား မေ ၂၊ ၂၀၀၈ ဗိုလ်ခဵပ်ြသိန်းစိန်- “တ၀က်တပဵက်ဒီမိုကရေစီနော်၊ ခန်ြဆမတ်။ အာဏာရင်ြစနစ် မဟုတ်ဘူးကြ။ တ၀က်တပဵက်ဒီမိုကရေစီ။” ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ် ဆမတ်။ “အောင်ဆန်းစုကည်ကိုိုိံင်ငံရေးမြာဝင်မပၝိုိံင်အောင် တားထားတာ မြားတယ်လိုႚ ကဵပြ်ူဖင့် မူမင်ပေၝင်။ သူကိုိံင်ငူံခားသားကို လက်ထပ်ခဲ့တာကိုးဗဵ။ ထိုင်ိးုိံင်ငံမြာဆိုရင် ဒီလို ရာဇ၀တ်မြ ကဵြးလန်ြထားပုံမဵြိးနဲႚတော့ သူ အိမ်တစ်လုံးတောင်မြ ပိုင်ဆိုင်ခငြ့် ရမြာ မဟုတ်ဘူး။ိုိံင်ငူံခားသားကိုေုကာက်တာ ဘာမြားသလဲဗဵာ။္ဘပီးတော့ အာဏာရင်ြစနစ်ကရော ဘာမြားနေလိုႚလဲဗဵာ။” (Stephff ၏ အထက်ပၝ ကာတနြ်းမြာ www.irrawaddy.org www.nationmultimedia.com တိုႚတငြ် ဖော်ူပ္ဘပီူးဖစ်သည်။) No tags for this post.
>Burmese Lawyers of Burma
> မြန်မာပြည်က ပြည်သူ့ရှေ့နေများဓာတ်ပုံသတင်းမေ ၂၊ ၂၀၀၈ မစုစုနွေးရှေ့နေ ဦးမြင့်သောင်း၊ ဦးခွန်ထွန်းဦးရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းနှင့် အဲန်အယ်ဒီရှေ့နေတဦးဖြစ်သော ဦးကြည်ဝင်းတို့ကို မတ် ၂၇ ၂၀၀၈၊ ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားများရဲ့ တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားမှာ အတူတကွ တွေ့မြင်ရစဉ် No tags for this post.
>သာမညဆရာတော်၊ ဦးပိန်တံတား၊ ငၝးမင်းဆြေ၊ မိုင်းဗုံးပေၞကစာ
> မိုးမခတောထဲကသတင်းအပိုင်းအစမဵား သာမညဆရာတော်၊ ဦးပိန်တံတား၊ ငၝးမင်းဆြေ၊ မိုင်းဗုံးပေၞကစာ အဝေုးကည့်မနြ်ေူပာင်း မေ ၂၊ ၂၀၀၈ သာမညဆရာတော် သာမညဆရာတော်ရဲႚ ရုပ်ကလာပ်ကို လက်နက်ကိုင်လူတစ်စုက လုယက်ယူငင်သြားတာ ဒီကနေႚ တစ်လူပည့်ပၝ္ဘပီ။ ဘယ်သူတေရြဲႚ လက်ခဵက်ူဖစ်တယ်ဆိုတာကိုတောိုိံ့င်ငံတော်က အခုခဵိန်ထိ ထုတ်ဖော်မေူပာသေးပၝဘူး။ ဆရာတော်ရဲႚဂူဗိမာန်တော်ဓာတ်ပုံ ကို myanmarisp.comမြာတြေႚလိုႚ ဖော်ူပပေးလိုက်ပၝတယ်။ ဦးပိန်တံတားခငြ့်ရက်ရည်ြယူ နာမည်ကေဵာ် ဦးပိန်တံတား ကဵြိးတယ် ဆိုတဲ့သတင်း ဖတ်လိုသူမဵားကို ၀ိကလီအလဲဗင်းဂဵာနယ်က စိတ်အဆာေူဖပေးပၝလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးထုတ်ဝိကလီအလဲဗင်းမြာ တံတားရဲႚနောက်ဆုံးအေူခအနေကို ပုံနဲႚတကြ ဖော်ူပထားပၝတယ်။ တောင်တမန်အင်း ဟိုဘက်ကမ်း ဒီဘက်ကမ်း ကူးလိုသူမဵား လေနြဲႚကူးနေရေုကာင်း ပုံမြာ တြေႚိုိံင်ပၝတယ်။ တံတားရဲႚ နေရာတခဵြိႚ အုတ်တိုင်တေနြဲႚ အစားထိုးထားတယ်ဆိုတာလည်း တြေႚိုိံင်ပၝရဲႚ။ ငၝးမင်းဆြေ တန်ဖိုးရိပြၝစ္ဘေပီးခဲ့တဲ့နေႚ မေလ...
>သာသနမောဠိ ဆရာတော်မဵား ရောက်ရြိ
> မစိုးရိမ်ဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒ အန္တိမအဂ္ဂိ ဈာပန အခမ်းအနားသို့ သာသနမောဠိ ဦးဆောင်ဆရာတော်များ ရောက်ရှိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂မေ ၂၊ ၂၀၀၈ သာသနမောဠိ ဥက္ကဋ္ဌ ပီနန်ဆရာတော် ဦးပညာဝံသနှင့် အတွင်းရေးမှူးဆရာတော် ဦးဥတ္တရတို့ နယူးယောက်သို့ ရောက်ရှိလာကြပြီဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။ ဌာနေ ဒုဥက္ကဋ္ဌဆရာတော် ဦးဝိလာသနှင့်တကွ အခြားရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်သော သာသနမောဠိဆရာတော်များ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြလျက် အစီအစဉ်များ ပြင်ဆင်နေကြပြီဟု ဆိုပါသည်။ ကဗျာဆရာ မောင်စွမ်းရည်ကို မိုးမခက ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် – မြန်မာပြည်တွင်းရှိ တပည့်သံဃာတော်များက ဆရာတော်ကြီး၏ ကြွင်းကျန်ရစ်သော အရိုးပြာတို့ကို မျှဝေပေးစေလိုသည့် ဆန္ဒရှိသည်ဟု ဆိုကြောင်း၊ မစိုးရိမ်ကျောင်းတော်ကြီး နှစ် ၁၀၀ ပြည့် အခမ်းအနားကျင်းပစဉ်ကလည်း သံဃာတော်များက အာဏာပိုင်တို့ အတားအဆီးများကို ဥပက္ခာပြုလျက် ဆရာတော်ကြီး၏...
>ဒီမိုကရေစီ ၅၀ ရာခိုင်ိံနြ်းရမည်ဟု ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ် ဟာသလုပ်
>ူမန်မာူပည် အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းေုကာင့် ဒီမိုကရေစီ ၅၀ ရာခိုင်ိံနြ်းရမည်ဟု ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ် ဟာသလုပ်အေပီသတင်းဌာနမေ ၁၊ ၂၀၀၈ ဒေၞအောင်ဆန်းစုကည်အား ရြေးကောက်ပဲဝြင်ခငြ့်မရရန် ရေးဆြဲထားသည့် အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းေုကာင့်ူမန်မာူပည်သည် တ၀က်တပဵက်ဒီမိုကရေစီစနစ်သိုႚ ဦးတည်နေေုကာင်း ထိုင်းဝန်ဋ္ဌကီးခဵပ်ြက ဟာသလုပ်ေူပာဆိုလိုက်သည်။ စစ်အုပ်ခဵပ်ြရေး တည်္ဘမဲစေရန် ရေးဆဲထြားသည်ဟု အကဲခတ်လေ့လာသူမဵားက သတ်မတ်ြထားသည့် ဖြဲႚစည်းအုပ်ခဵပ်ြပုံအေူခခံဥပဒေမူုကမ်းကို ယခုလ ၁၀ ရက်နေႚတငြ်ူပည်သူလူထုက ဆိံ္ဋမဲပေုးကမည်ူဖစ်သည်။ အေူခခံဥပဒေမူုကမ်းအရိုိံင်ငူံခားသာိးံငြ့် လက်ထပ်ခဲ့ဖူးသည့်အတကြ် ဒေၞစုအား ရြေးကောက်ပဲမြဵားတင်ြဝင်ရောက်ခငြ့်ူပမြည်မဟုတ်ပေ။ ဒေၞစုသည်္ဘပီးခဲ့သည့် ၁၈ိံစ်ြအတငြ်း ၁၂ိံစြ်ုကာ အထိန်းသိမ်းခံနေရသူဖစ်သည်။ “ဒေၞစုကို သူတိုႚလတ်ြပေးမြာ မဟုတ်ဘူး။ သူတိုႚက ဒေၞစုကို ဖယ်ထုတ်ထားမြာပဲ” ဟု ထိုင်ိးုိံင်ငံဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ် ဆမတ်က ဆိုသည်။ူမန်မာဝန်ဋ္ဌကီးခဵပြ်...
Page 1,855 of 1,929«1...1,8531,8541,8551,8561,857...1929»
>There's no place to run or host Chinese Olympic Touch in San Francisco, USA
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အလွန်အကျွံသည်းခံနေကြောင်း ဦးဝင်းတင် ဝေဖန် - Veteran Burmese activist Win Tin says democracy icon is too conciliatory
Ku Mo Jo - Burmese Regime on suicide watch
>Cartoon Saw Ngo- Dictator and Martyrs
>Invitation to Essay Competition at SF Literary Talk
မောင်မောင်စိုး - NCA နှင့် Failed State - အပိုင်း (၁)
ကာတွန်းမင်းထက်လူရဲ့ အမှိုက်ပုံထဲထားခဲ့မယ် ထင်လို့လား … https://t.co/Uv4DamOkTz https://t.co/pN3n6yZWVN about 44 minutes ago ReplyRetweetFavorite
မောင်မောင်စိုး ● အင်စတီကျူးရှင်းနိဒါန်း https://t.co/bivYJ0L4ly https://t.co/VFC07Vivpz about 51 minutes ago ReplyRetweetFavorite